VaShamu Votyisidzira Masangano eNhau Anonyomba VaMugabe
Gunyana 13, 2011
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaWebster Shamu, vanoti vemapepanhu nenhepfenuro dzakazvimirira kana kuti dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika, vanogona kutorerwa marezinesi avo kana vakaramba vachishora pamwe nekunyomba hurumende pamwe nemutungamiri wenyika, VaRobet Mugabe.
VaShamu vakataura mashoko aya vari kumusangano webato ravo kwaMutare. VaShamu vanoti izvi zvave kunyanya mazuva ano nekuti pave kuda kuitwa sarudzo izvo zvava kupa kuti nhepfenuro idzi dzishore VaMugabe nechinangwa chekuda kuti vanhu vapandukire hurumende yavo.
Nhepfenyuro dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika dzakaita se SWRadio Africa ne Studio7 hadzina kupihwa marezenisi nehurumende sezvo dzichitepfura dziri kunze kwenyika pasi pemitemo yepasi rose yekutepfenyura.
VaShamu vanotiwo nyika dzakaita seBritain neAmerica dzine mitemo ino dzvinyirira vatori venhau, asi Zimbabwe ikangoita chinhu vanobva varova bembera.
Vanomiririra Zanu-PF kuGutu West, VaNoel Mandebvu, vanoti mashoko aVaShamu ari kutaura chokwadi chezviri kuitika.
Asi vanomirira MDC-T kuMakoni South, VaPishai Muchauraya, vanoti VaShamu vari kutaura zvisina maturo.
Hurukuro naVaPishai Muchauraya naVaNoel Mandebvu